Nei Mwari Achikosha Muupenyu Hwedu?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Vana chiremba vepfungwa vanoti, kuti vanhu vafare, vanoda zvinopfuura kungova nezvokurarama nazvo. Izvi tinozviona pakuti vanhu vanoda kuita zvinhu zvine chinangwa kana kuti kuva nemumwe munhu ari pamusoro pavo wokushandira. Kuti vaite izvi, vanoshandisa nguva yavo yokuzvivaraidza vachiona zvinhu zvakasikwa, vachiteerera nziyo uye vachiita zvimwe zvakasiyana-siyana. Asi zvinhu izvozvo hazviiti kuti vakawanda vawane mufaro wenguva refu.
Mwari anoda kuti vanhu vafare iye zvino uye nokusingaperi
Pfungwa yokuti vanhu vanongoberekwa vaine chido chokunamata haisi itsva kuvaverengi veBhaibheri. Zvitsauko zvokutanga zvaGenesisi zvinoratidza kuti, pashure pokunge Mwari asika murume nemukadzi vokutanga, aigara achitaura navo, achiita kuti vave neukama naye. (Genesisi 3:8-10) Mwari haana kusika vanhu kuti vararame vasingatungamirirwi naye, asi akavasika vaine chido chokukurukurirana neMuiti wavo. Bhaibheri rinotaura kakawanda nezvechido ichi.
Somuenzaniso, Jesu akati: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mateu 5:3) Mashoko aya angaita kuti tigumise kuti, mufaro wechokwadi uye kugutsikana zvinobva pakugutsa chido chedu chokuziva Mwari. Tingagutsa sei chido ichi? Jesu akatipa mhinduro paakati: “Munhu haangararami nechingwa chete, asi nemashoko ose anobuda mumuromo maJehovha.” (Mateu 4:4) Mashoko ose anobuda mumuromo maMwari, kureva mafungiro aMwari uye mirayiridzo yake zviri muBhaibheri, zvinoita sei kuti tifare uye tigutsikane muupenyu? Ngatimboonai nzira nhatu dzinokosha.
Tinoda Kutungamirirwa Zvakanaka
Mazuva ano kune nyanzvi dzakawanda dzakagadzirira kupa mazano panyaya dzokudyidzana kwevanhu, dzerudo, dzemhuri, dzekugadzirisa kusawirirana, dzokuwana mufaro, uye dzokuva nechinangwa muupenyu. Asi ndiani mumwe akakodzera kupa mazano akanaka uye anoratidza kunzwisisa panyaya idzi kunze kweMuiti wevanhu, Jehovha Mwari?
Bhaibheri rinotitungamirira muupenyu sezvinongoita bhuku rokushandisa mudziyo
Funga izvi: Kana ukatenga mudziyo mutsva wakadai sekamera kana kuti kombiyuta, unotarisira kuti upiwe mirayiridzo yakabva kune akaugadzira, kana kuti bhuku rinotaura mashandisiro aunofanira kuita mudziyo wacho nemazvo kuti unyatsokubatsira. Bhaibheri rinogona kufananidzwa nebhuku rakadaro. Rine mirayiridzo yatakapiwa naMwari, musiki wevanhu, yemashandisiro atinofanira kuita upenyu hwedu. ‘Bhuku iri remirayiridzo,’ rinotsanangura kuti upenyu hwedu hwakasikirwei uye hunofanira kushandiswa sei zvinonyatsobatsira.
Sezvinongoita bhuku remirayiridzo rakanyorwa zvose zvinodiwa, Bhaibheri rinoita kuti vanhu vazive maitiro anopesana nemashandisiro akanaka atinofanira kuita upenyu hwedu. Mazano anopiwa nevanhu angaita seanofadza uye seari nyore kushandisa, asi hazvina musoro here kufunga kuti tichadzivisa matambudziko uye tichawana zvakanakisisa kana tikashandisa mirayiridzo inobva kuMuiti wedu?
“Ini, Jehovha, ndini Mwari wako, Iye anokudzidzisa kuti ubatsirwe, Iye anokufambisa panzira yaunofanira kufamba nayo. Haiwa kudai waizoteerera mirayiro yangu! Rugare rwako rwaizoita sorwizi, nokururama kwako semafungu egungwa.”—Isaya 48:17, 18
Tinogona kuwana mirayiridzo uye rubatsiro rwatinoda muBhaibheri
Kunyange zvazvo Jehovha Mwari achitipa mirayiridzo, haatimanikidzi kuibvuma. Anotida uye anoda kutibatsira, saka anotiudza mashoko anozorodza okuti: “Ini, Jehovha, ndini Mwari wako, Iye anokudzidzisa kuti ubatsirwe, Iye anokufambisa panzira yaunofanira kufamba nayo. Haiwa kudai waizoteerera mirayiro yangu! Rugare rwako rwaizoita sorwizi, nokururama kwako semafungu egungwa.” (Isaya 48:17, 18) Chiripo ndechokuti, kana tikateerera mirayiro yaMwari, tichava neupenyu hwakanaka. Tingazvitaurawo tichiti, Mwari anokosha muupenyu hwedu kana tichida kuva neupenyu hwakanaka uye hunofadza.
Tinoda Mhinduro Pamatambudziko Eupenyu
Vamwe vanofunga kuti Mwari haakoshi kwavari, nokuti vanoona sokuti nyaya dzinotemesa musoro dzavanotarisana nadzo muupenyu dzinoita kuti zviome kubvuma kuti kuna Mwari ane rudo. Somuenzaniso, vangabvunza kuti: ‘Nei vanhu vakanaka vachitambura?’ ‘Nei vamwe vana vachiberekwa vakaremara?’ ‘Nei upenyu hwakazara nezvakaipa kudai?’ Mibvunzo iyi inokosha zvechokwadi uye kuwana mhinduro dzacho kunogona kuchinja upenyu hwedu zvikuru. Pane kukurumidza kupa Mwari mhosva pamatambudziko aya, ngationei kuti Shoko raMwari, Bhaibheri rinoti chii.
Muchitsauko chechitatu chaGenesisi tinoverenga nezvaSatani, uyo akashandisa nyoka pakuita kuti murume nemukadzi vekutanga vatyore murayiro waJehovha Mwari, wokuti vasadya muchero womuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Satani akaudza Evha kuti: “Chokwadi hamungafi. Nokuti Mwari anoziva kuti zuva ramuchaudya, maziso enyu achasvinudzwa uye muchava vakafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.”—Genesisi 2:16, 17; 3:4, 5.
Nemashoko aya, Satani haana kungotaura kuti Mwari murevi wenhema chete asi akaratidzawo kuti matongero aMwari haana kunaka. Dhiyabhorosi akaratidza kuti kudai vanhu vaizomuteerera, zvinhu zvaizovafambira zvakanaka. Nyaya idzodzo dzaizogadziriswa sei? Jehovha akasarudza kuti papfuure nguva yakakwana, kuti zvibude pachena kuti kupomerwa kwaakaitwa kwaiva kwechokwadi here kana kuti kwenhema. Mwari akanga achitopa Satani nevatsigiri vake nguva yokuti varatidze kana vanhu vachigona kurarama zvakanaka pasina kutungamirirwa naMwari.
Unofunga kuti mhinduro yokupomera kwaSatani ndeipi? Vanhu vanogona kuva neupenyu hwakanaka uye kuzvitonga pasina Mwari here? Zvinhu zvava nemazana emakore zvichionesa vanhu chitsvuku zvakadai sokutambura, utsinye, kurwara, rufu, kuparwa kwemhosva, hondo, kuparara kwetsika, hondo dzokutsakatisa marudzi, nezvimwewo, zvinoratidza kuti zvechokwadi kuedza kwevanhu kuzvitonga pasina Mwari kwakundikana zvinosuruvarisa. Pane kupomera Mwari kuti ndiye ari kukonzera matambudziko evanhu, Bhaibheri rinotaura chiri kunyanya kuakonzera richiti: “Munhu akatonga mumwe munhu achimukuvadza.”—Muparidzi 8:9.
Tichifunga zvose izvi, hazvisi pachena here kuti tinofanira kubvuma zvinotaurwa naMwari pamatambudziko evanhu uyewo kubvuma kuti ndiye achapedza matambudziko aya? Achaapedza sei?
Tinoda Kubatsirwa naMwari
Kwenguva yakareba vanhu vange vachida chaizvo kusunungurwa pazvirwere, kukwegura, uye rufu. Vakapedza nguva yakawanda, simba uye zvinhu zvavo kuti vawane rusununguko urwu asi havana kubudirira. Vamwe vakafunga kuti zvinhu zvakadai sokudya musanganiswa wezvinhu zvakasiyana-siyana, kunwa mvura dzavanopiwa, kana kuti kugara kune imwe nzvimbo, zvaizoita kuti vasakwegura. Asi zvose izvi hazvina kubudirira.
Mwari anoda kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka, uye vafare. Ndicho chaiva chinangwa chake paakasika vanhu uye haana kuchikanganwa. (Genesisi 1:27, 28; Isaya 45:18) Jehovha Mwari anotivimbisa kuti chinhu chose chaanenge aronga chinotobudirira. (Isaya 55:10, 11) Bhaibheri rinotiudza nezvevimbiso yaMwari yokudzorera Paradhiso yakaraswa nemurume nomudzimai vokutanga. Mubhuku rokupedzisira reBhaibheri tinowana mashoko aya anoti: “[Jehovha Mwari] achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvinhu zvokutanga zvapfuura.” (Zvakazarurwa 21:4) Mwari achaita sei kuti zvinhu izvi zvakanaka chaizvo zviitike uye tingaitei kuti tibatsirwe nevimbiso iyi?
Mwanakomana waMwari, Jesu Kristu, akadzidzisa vateveri vake kuti vanyengeterere kuti kuda kwaMwari kuitwe. Vanhu vakawanda vanoziva kana kuti vanogara vachidzokorora mashoko emunyengetero wacho unonzi nevamwe Munyengetero waShe. Mashoko acho anoti: “Baba vedu vari kumatenga, zita renyu ngaritsveneswe. Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvakunoitwa kudenga.” (Mateu 6:9, 10) Zvechokwadi, Umambo hwaMwari ndihwo huchashandiswa naJehovha Mwari kuti abvise matambudziko ari kukonzerwa nokutonga kwevanhu, ounza nyika itsva yakarurama yaakavimbisa. * (Dhanieri 2:44; 2 Petro 3:13) Tingaitei kuti tibatsirwe nevimbiso yaMwari iyi?
Jesu Kristu anotiudza danho riri nyore ratinofanira kutora achiti: “Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.” (Johani 17:3) Zvechokwadi, tichibatsirwa naMwari, tinogona kurarama nokusingaperi munyika itsva yaakavimbisa. Tarisiro iyi inogona kukupa chimwe chikonzero chokupindura kuti hungu kumubvunzo wokuti, Mwari anokosha here muupenyu hwedu?
Yava Nguva Yokutsvaga Mwari
Makore 2 000 akapfuura, muapostora Pauro akataura mashoko anotevera nezvaMwari paAreyopago, muAtene, kuvanhu vemuguta iroro vaiva neuzivi hwavo uye vaida kuongorora zvinhu, achiti: “Iye anopa vanhu vose upenyu nemhepo yokufema nezvinhu zvose. Nokuti naye tine upenyu, tinofamba uye tiripo, sezvakataurwa nevamwe vadetembi vari pakati penyu kuti, ‘Nokuti tiri chizvarwa chakewo.’”—Mabasa 17:25, 28.
Zvakataurwa naPauro kuvaAtene zvichiri zvechokwadi. Musiki wedu anotipa mhepo yatinofema, zvokudya, uye mvura yatinonwa. Taisazokwanisa kurarama tisina zvinhu zvakanaka zvatinopiwa naJehovha kuti tirarame. Asi nei Mwari achiramba achipa vanhu vose zvinhu izvi pasinei nokuti vanofunga nezvake here kana kuti kwete? Pauro akati izvi zvinoitirwa “kuti vatsvake Mwari, vamutsvangadzire, vamuwane, chokwadi, kunyange zvazvo asiri kure nomumwe nomumwe wedu.”—Mabasa 17:27.
Ungada kuziva Mwari zviri nani here, kureva kuti kuziva zvakawanda nezvezvinangwa zvake, uye zano raanotipa rokuti tive neupenyu hwakanaka iye zvino uye nokusingaperi? Kana zvakadaro, unokurudzirwa kuti utaure nemunhu akupa magazini ino kana kuti nyorera vabudisi vayo. Vachafara kukubatsira.
^ ndima 20 Kuti uwane mamwe mashoko nezvokuti Umambo hwaMwari huchaita sei kuti kuda kwake kuitwe panyika, ona chitsauko 8 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha, iro rinowanikawo paIndaneti uye unogona kurikopa pawww.jw.org.